Guriga Carlo Ancelotti Oo La Bartilmaameedsaday Kadib Tuugo Usoo Dhacday Iyo Shaqsiyaad Kale Oo Hore Loo Dhacay.
Home Horyaalka Ingiriiska Guriga Carlo Ancelotti oo la bartilmaameedsaday kadib tuugo usoo dhacday iyo shaqsiyaad...
Tababaraha kooxda Everton Carlo Ancelotti iyo qoyskiisa ayaa la sheegay in la xaday habeenimadii Jimcaha, xilligaas oo ay tuugadu si nabad ah ku galeen ka dib ay jabsadeen abbaaraha 6.30 pm. tuugada ayaa ka carareen goobta markii ay ogaadeen ineey joogto gabadhii Ancelotti, oo loo maleynayay inay kaligeed guriga joogtay waqtigaas. Nasiib wanaagse, qofna guriga gudihiisa kuma dhaawacmin dhacdadaas
Ancelotti oo ku mashquulsanaa diyaarinta kooxdiisa si uu u wajaho Fulham kulanka Goodison Park ee Premier League isbuucaan ayaa ku nool xaafada Sefton ee xeebta Merseyside waxaana Liverpool Echo ay soo warinaysaa in kaliya badbaadada la qaatay madaama dambiilayaashu ay jahwareereen markii ay hubeysnaayeen hantida.
Qoraal ka soo baxay afhayeenka booliiska Merseyside ayaa akhrinaya: Waxaan raadineynaa macluumaad ka dib markii si badbaado leh looga xaday tuugada Crosby fiidnimadii Jimcaha (12 Febraayo). Waxaa naloogu yeeray 6.35 pm si aan u soo sheegno in labo nin ay galeen guri ku yaal Hall Road East qiyaastii 6.30 pm.
Dembiilayaasha waxaa lagu tilmaamay inay xirnaayeen dharka biyaha celiya ee madow, oo ay suuragal tahay qoraal cad, iyo balaclavas madow. Deganayaashii guriga wax dhaawac ah ma soo gaarin Saraakiisha ka soo qeybgashay oo wax ka weydiinaya dhacdada ayaa socda Hantida waxaa si baaris ah loo baari doonaa fursadaha CCTVna waa la baarayaa.”
Burcadda guryaha kubbadda cagta waa wax aan caadi aheyn, gaar ahaan waqooyi-galbeed. Guryaha ciyaartoydu badanaa waa la bartilmaameedsadaa marka tuugadu ogaadaan inay ka bixi doonaan ciyaaraha, iyo ciyaartoyda Everton, Liverpool, Manchester United iyo Manchester City si cadaalad ah ayey u ahaayeen dhibanayaal sanadihii la soo dhaafay.
Steven Gerrard, Sadio Mane, Roberto Firmino, Fabinho, Dirk Kuyt, Pepe Reina, Peter Crouch, Dejan Lovren, Phil Jagielka, Romelu Lukaku, Wayne Rooney, Angel Di Maria, Raheem Sterling iyo Riyad Mahrez ayaa ka mid ah kuwa la bartilmaameedsaday. ee la soo dhaafay, mid walbaa wuxuu hayaa sumcad dadweyne oo aad u sareysa.
Haweeneyda Gerrard waxaa loogu hanjabay mindiyo iyo afduubka carruurteeda haddii aysan ku wareejin dahabka Tuuggii dhacdadaas waxaa la xukumay toddobo sano sanadkii 2010 Dhanka kale, isku dayga lagu jabinayo guriga qoyska Di Maria ayaa inta badan lagu liis gareeyaa dhowr sababood oo muhiim ah oo uu ugu guuldareystay inuu dego Manchester United, iyadoo qoyskiisa ay ka cabsi qabeen dhibaatada.
Hal mar, laba tuug oo jabsaday guriga goolhayihii hore ee United Tomasz Kuszczak sanadkii 2020 ayaa ka safray Chile oo dhan si ay u bartilmaameedsadaan guryaha ku yaal tuulooyinka hodanka ah ee Cheshire. Waa la qabtay oo la xidhay markii ay isku dayeen inay garaacaan guriga Pole mar labaad toddobaad ka dib.
Previous articlePep Guardiola oo Xaqiijiyay Saddexda laacib ee ka Maqan Manchester City Kulanka Tottenham Hotspur
Next articleisbar bardhig ku saabsan Rashford & Rooney & Ronaldo 250 kulan oo Man Utd ah.